(tonga teto avy amin'ny Empira persiana)
I Persia na Persa dia faritra tany Atsinanana-Akaiky, teo anelanelan' ny Ranomasina Kaspiana sy ny Helodrano Persika, ary mifanandrify amin' i Iràna ankehitriny. Ny mponina tao no atao hoe Persiana. Tamin' ny taona 1935 i Persia dia novana anarana ho Iràna. Maro ireo fanjakan-dehibe (empira) nifandimby tao Persia hatramin' ny an' i Mediana ka hatramin' ny an'ny Persiana. Nahatratra ny fara tampon' ny lazany i Persia tamin' ny fanapahan' ireo Akemenida.
Ny fiovaovan'ny faritra nanjakan'ny Persiana nandritra ny tantara
Ireto ireo fanjakana sy ny fianakaviana nanjaka nalaza tamin' ny fanapahana an' i Persia:
Fanjakan' ny Partiana Arsakida (247 tal. J.K - 224 taor. J.K.)
Empira Safavida (1501-1736 taor. J.K.)
Dinastia zanda (1751-1794 taor. J.K.)
1 Tantaran' i Persia talohan' ny fidiran' ny Arabo
1.1 Hatramin'ny andron' ny Mediana ka hatramin' ny an' ny Persiana
1.2 Ny Empira Akemenida
1.3 Tamin'ny vanimpotoana helenistika seleokida
1.4 Ny Empira Partiana Arsakida
1.5 Ny Empira Sasanida
2 Tantaran'i Persia tamin'ny vanimpotoana silamo
2.1 Ny fianakaviana safavida
2.2 Ny fianakaviana afsarida
2.3 Ny fianakaviana zanda
2.4 Ny fianakaviana kajara
Tantaran' i Persia talohan' ny fidiran' ny AraboHanova
Hatramin'ny andron' ny Mediana ka hatramin' ny an' ny PersianaHanova
Ny Lembalemba Iraniana dia nonenan' ireo vahoaka ariana nanomboka tamin' ny taona 1500 tal. J.K. tany ho any, ka ny foko lehibe tamin' ireo dia ny Mediana na Meda, izay nonina tao amin' ny tapany avaratra andrefana, sy ny Parsa (na Persiana) izay nonina tao amin' ny tapany atsimo. Nanjaka tamin' izany faritra izany ny Mediana nefa rava izany tamin' ny fahatongavan' ny Skitiana (na Skita na Sita) tamin' ny taonjato faha-7 tal. J.K., na dia afaka nandroaka azy ireo ny Mediana tamin' ny taona 625 tal. J.K. Ny Persiana tamin' izany fotoana izany dia nanana ny fanjakany manokana nefa nandoa hetra tamin' ny Mediana ka tsy nifarana izany toe-javatra izany raha tsy tamin'ny andron'i Kirosy Lehibe, izay mpanjaka akemenida nitondra an'i Ansàna.
Ny Empira AkemenidaHanova
Tamin'ny taona 550 tal. J.K. dia nandresy ny Mediana i Kirosy Lehibe ka lasa mpanjaka persiana tena fantatra voalohany. Azony ny Fanjakan' i Lidia tamin'ny taona 546 tal. J.K. sy ny an'i Babilônia tamin'ny taona 539 tal. J.K. ka nahatonga ny Empira Persiana ho fanjakana matanjaka indrindra tamin'iny faritra iny. I Kambisesy II, izay zanaka sy mpandova azy teo amin'ny fitondrana no nanitatra indray ny faritry ny Empira persiana tamin'ny nahazoany an'i Egipta tamin'ny taona 525 tal. J.K. Tamin'ny taona 521 i Dariosy I (na Dariosa I) dia niakatra teo amin'ny fanapahana ny Empira ka nampikisaka ny sisintany hatrany amin'ny ony Indosy sy nanamboatra lakandrano mampitohy an'i Nily sy ny Ranomasina Mena, ka izany no niantsoana azy hoe Dariosy Lehibe.
Nalamin' ny Akemenida ny Empira Persiana tamin'ny nizarazarany azy ho faritany (satrapia) roapolo nofehezin'ny solontenan'ny emperora (satrapa), tamin'ny alalan'ny fametrahana fehezan-dalàna, tamin'ny fanefena vola ary tamin'ny famoronana sampan-draharaha miantoka ny fifandefasan-taratasy. Nampandrosoin'ny Akemenida ny zavakanto sy ny maritrano. I Persepolisy no renivohitra tamin'ny farany.
Tamin'ny taona 499 tal. J.K. dia nanomboka ny ady medika i Dariosy I. Ravany ny fikomian'ny Grika iôniana izay teo ambany fifehezan'ny Persiana tany amin'ny morontsiraka andrefana any Azia Minora izay nanomboka tamin'ny taona 499 tal. J.K. hatramin'ny taona 493 tal. J.K. Nanafika ny tanàna grika izay nanohana ireo mpikomy koa I Dariosy mba hanasaziana ireo tanàna ireo. Resy ny Persiana tamin'ny ady tao Maratôna tamin'ny taona 490 tal. J.K. ary maty i Dariosy I raha niomana hanafika indray. I Kserksesy I zanany no nanatanteraka ny ady medika tamin'ny nandefasany ny tafiny tany Gresy (na Grisia), resy anefa izy tamin'ny ady an-draniomasina tao Salamina tamin'ny taona 480 tal. J.K., resy koa tamin'ny ady an-tanety tao Platea sy tao amin' ny tanjona Mikala (ao amin' ny Ranomasina Egea) tamin'ny taona 479 tal. J.K.
Ny fanafihana nataon'i Kserksesy I no fanafihana lehibe farany nataon'ny Akemenida hanitarana ny Empira persiana. Tamin'ny andro nanjakan'i Artakserksesy I zanak'i Kserksesy I dia nitroatra i Egipta izay notohan'ny Grika hatramin'ny 464 ka hatramin'ny 456 tal. J.K. Na dia nisy aza ny famaizana dia fanombohan'ny fahavoazan'ny Empira persiana akemenida izany. Nihanalemy ny Empira persiana vokatry ny fikomiana maro nandritra ny taonjato faha-4 tal. J.K., fa ny tena namarana ny momba azy dia ilay Makedoniana atao hoe Aleksandra Lehibe, izay nendresy an'i Dariosy III tamin'ny ady tamin'ny taona 334 tal. J.K. hatramin'ny taona 331 tal. J.K., ka nanakambana ny Empira persiana tamin'ny tany manodidina ny Ranomasina Mediteranea izay efa azon'i Aleksandra Lehibe.
Tamin'ny vanimpotoana helenistika seleokidaHanova
Nakamban'i Aleksandra Lehibe tamin'ny Empira helenistika i Persia. Nampidiriny tao amin'ny tafiny ny Persiana maro sady nentaniny ny manamboninahitra tao amin'ny tafika mba hanambady vehivavy persiana. Rehefa maty i Aleksandra dia niady ny fitondrana any Persia ny mpitari-tafiny ka i Seleokosy I no nandresy. Rehefa azon'i Seleokosy i Babilôna tamin'ny taona 312 tal. J.K. dia nakambany tao ny sisa tamin'ny Empira persiana hatrany Indosy, ny i Siria ary i Azia Minora. Nikambana tao amin'ny tany nofehezin'ny Seleokida hatramin'ny nanonganan'ny Partiana azy ireo tamin'ny taonjato faha-2 tal. J.K.
Ny Empira Partiana ArsakidaHanova
Avy any Partia ny fianakavia-mpanjaka Arsakida, izay taranak'i Arsaka I (grika: Ἀρσάκης / Arsakês, persàna: ارشک / Aršak). Nanompo ny Seleokida izy ireo tamin'ny tenantenan'ny taonarivo faha-3 tal. J.K., nefa nametraka tsikelikely ny fahefany tao Persia izy ireo. Niady tamin'ny Seleokida sy ny Rômana izy ireo alohan'ny hanonganany tanteraka ny Sasanida tamin'ny taona 224 taor. J.K.
Ny Empira SasanidaHanova
Tamin'ny taona 224 taor. J.K. dia nikomy tamin'ny Partiana arsakida ny mpanjaka Ardasira I izay nofehezin'ny Partiana: resin'i Ardasira I izy ireo tamin'ny ady tao Ôrmoza sady nanangana fianakavia-mpanjaka persiana vaovao, dia ny Sasanida. Azon'i Ardasira I ny fanjakana madinika maro, nanani-bohitra an'i India izy, nampandoa hetra ireo lehibe tany Penjaba sady naka an'i Armenia. Nataony fivavaham-panjakan'i Persia ny zoroastrisma. Nandimby an'i Ardasira I ny zanany lahy atao hoe Sapôra I tamin'ny taona 241, izay niady indroa tamin'ny Empira rômana, sady naka ny tany tany Mesôpôtamia sy tany Siria ary tao Azia Minora koa. Teo anelanelan'ny tana 260 sy 263 dia votsotra ireo tany azony fa nalain'ilay andriandahy tany Palmira atao hoe Ôdenà izay niaraka tamin'ny Rômana. I Narse no namelona indray ny fifanandrinana tamin'i Rôma nefa resin'ny tafika rômana tamin'ny taona 297 ny tafika nentiny. Voatery nanao fifanarahana tsy hiady i Narse ka nikisaka avy any amin'ny ony Eofrata nankany amin'ny ony Tigrisy (na Tigra) ny sisintany andrefan'i Persia. Lasa koa ny ampahan-tanin'i Persia hafa. Tamin'ny taonjato faha-4 dia niady intelo tamin'ny Rômana sady nandresy azy ireo intelo i Sapôra II ka azony indray ny tany izay efa votsotra tany aloha.
Nisy mpanjaka hafa atao hoe Iazdgarda I izay nanapaka tao anaty filaminana tamin'ny taona 399 hatramin'ny taona 420. Tamin'ny voalohany dia nanome fahalalahana ny fivavahana kristiana tany Persia izy. Taty aoriana anefa dia niverina tamin'ny zoroastrisma izy ka nanenjika ny Kristiana nandritra ny efa-taona. Nanohy izany fanenjehana izany ny zanany lahy atao hoe Bahràma V izay namaky ady tamin'i Rôma tamin'ny taona 420. Resin'ny Rômana i Bahràma V tamin'ny taona 422. Navelan'ny Rômana halalaka ny fivavahana zoroastriana eran'ny empira, ka ho takalon'izany dia navela halalaka koa ny fivavahana kristiana tany Persia. Tamin'ny taona 424 dia nanambara ny fahaleovan-tenany tamin'ny Fiangonana tandrefana ny Kristiana persiana.
Tamin'ny taonjato faha-5 dia tonga ny tafika barbarianan'ny Heftalita (na "Hona fotsy") ka namely an'i Persia, dia resin'izy ireo ny mpanjaka Firoza II tamin'ny taona 483 sy nampandoa hetra izy ireo nandritra ny taona vitsy. Tamin'io taona 483 io ihany dia lasa foto-pampianarana ofisialin'ny Persiana kristiana ny nestorianisma. Nanome tombondahiny ny fampianaran'i Mazdàka (mpisoron-dehibe zoroastriana izay nikatsaka ny fampitambatra ny tany) tamin'ny taonjato faha-5 i Kavada I. Tamin'ny taona 498 dia naongan'ny rahalahiny atao hoe Zamaspa i Kavàda I nefa niverina teo amin'ny fitondrana indray tamin'ny taona 501 noho ny fanampian'ny Heftalita azy. Niady indroa tamin'ny tany Andrefana i Kavàda tamin'ny taona 523 nefa tsy nahomby izany ka nitsahatra tsy niaro an'i Mazdaka sady nandringana ny mpanaraka ny fivavahany izy.
I Kôsrô I Anosarvàna zanaka sy mpandimby an'i Kavàda dia nahita fahombiazana kokoa tamin'ny ady nifanaovany tamin'ny emperora bizantina atao hoe Jostiniano I sady nanitatra ny fahefany hatrany amin'ny Ranomasina Mainty sy tany Kaokazy, ka izy no mpanjaka matanjaka indrindra tamin'ireo mpanjaka sasanida rehetra. Nasiany fanatsarana ny fitanatanan-draharaham-panjakana tao amin'ny empira sady naveriny ho fivavaham-panjakana ny zoroastrisma. I Kôsrô II Abhatveza zafikeliny no nanomboka nanao ady lavareny tamin'ny Empira bizantina tamin'ny taona 602, ka nandresy sy naka ny ankamaroan'ny tany amin'ny atsimo andrefan'i Azia Minora sy any Egipta. Voasakan'ny emperora bizantina Herakliosy izany fanitaran-tany izany, ka teo anelanelan'ny taona 622 sy 627 dia nikisaka tany amin'ny nisy azy volohany ny sisintanin'ny Persiana.
I Iazdgarda III no mpankana sasanida farany. Tamin'ny androny (taona 632 hatramin'ny 651) no nidiran'ny Arabo tao Persia ka nandrava ny fanoherana rehetra ary nanaisotra tsikelikely ny zoroastrisma sy nampiditra ny finoana silamo ary nampiditra an'i Persia tao amin'ny kalifata.
Tantaran'i Persia tamin'ny vanimpotoana silamoHanova
Ny fianakaviana safavidaHanova
Ny Empira Safavida no natanjaka indrindra tamin' ny Empira Iraniana izay niorina taorian'ny fakan' ny Miozolmàna an'i Persia. Tao Ardabila ny Safavida no nanapaka ny ampahany lehibe tamin'i Persia sady nanamafy ny maha faritra persiana izany faritra izany, ka izy ireo no fianakavia-mpanjaka teratany persiana voalohany hatramin'ny Empira sasanida ka niezaka nampiray ny fanjakana persiana.
Niroborobo ny haisoratra sy ny zavakanto ary ny maritrano tamin'ny andron'ny Safavida, ary matetika dia lazaina fa izany dia "faharetahan'ny Empira persiana fanindroany". Nataon'ny Safavida fivavaham-panjakana ny finoana silamo siita, tsy tahaka ny tao amin'ny Empira Ôtômàna izay nanao ny finoana silamo sonita ho fivavaham-panjakana. Ny Empira safavida no fanjakana silamo iraniana voalohany izay nitovy lenta tamin'ny Ôtômana sy ny Mamelòka.
Ny fianakaviana afsaridaHanova
Ny fianakavia-mpanjaka afsarida dia fianakavia-mpanjaka iraniana izay avy ao Korasàna avy amin'ny foko Afsara. I Nader Shah no naorina io dinastia i. Nitombo ny herin'i Nader nandritra ny fotoana nisian'ny fikorontanana tao Iràna taorian'ny fikomian'ny Pastona Hotaky izay nanongana an'ilay soltana malemy atao hoe Husayn, tamin'ny nakan'ny Ôtômàna (izay fahavaloon'ny Safavida) sy ny Rosiana ny ampahan-tanin'i Persia. Nampiraisin'i Nader indray ny tanin'i Persia ka noroahiny ireo mpanani-bohitra. Lasa ampy tanjaka i Nader ka nanapa-kevitra ny hanongana ny mpanjaka farany tao amin'ny dinastia safavida izay nanapaka an'i Iràna mihoatra ny 200 taona, ka nanjary Shah izy tamin'ny taona 1736. Nanapaka an'i Iràna ny Afsarida tamin'ny taona 1736 hatramin'ny taona 1796.
Ny fianakaviana zandaHanova
Ny fianakavia-mpanjaka Zanda dia fianakaviana iraniana avy amin'ny foko atao hoe Laka (Lak), izay sampan'ny foko atao hoe Lora (Lurs), naorin'i Karim Khan Zand izay nanapaka ny faritra atsimo sy afovoan'i Iràna tamin'ny voalohany tamin'ny taonjato faha-18. Niitatra ny tany notapahan'io dinastia io ka tafiditra tao ny ampahany be tamin'ny sisa amin'ny tanin'i Iràna ankehitriny, toraka izany koa i Azerbaijàna sy i Bareina ary ny ampahan-tanin'i Iràka sy i Armenia.
Ny fianakaviana kajaraHanova
Tamin'ny taona 1796, taorian'ny fionganan'ny fianakavia-mpanjaka Zanda sy ny Afsarida, i Agha Mohammad Khan ao amin'ny fianakaviana Kajara no nanjaka tokana tao Iràna. Tsy ela taorian'izay (taona 1797) anefa dia novonoin'ireo mpanompony izy. Satria tsy nanan-janaka izy dia i Fath-Ali Shah izay zanaky ny iray tampo aminy no nandimby azy. Ny fanjakan'i Fath-Ali Shah dia nitrangan'ny fahaverezan-tany taorian'ny ady nifanaovany tamin'ny Rosiana tamin'ny taona 1804-1813 sy tamin'ny taona 1826-1828. Maty tamin'ny taona 1834 i Fath-Ali ka ny zafikeliny no nandimby azy, dia i Mohammad Shah.
Nandritra ny fanjakany tsy naharitra ela dia niezaka nanavao ny tafika iraniana i Mohammad Shah ka naka indray ny tanànan'i Herat. Na dia izany aza dia tsy nahomby ny ezaka nataony. Maty tamin'ny faha-40 taonany izy tao amin'ny lapa Mohammadieh tamin'ny taona 1848. Ny zanany Naser al-Din Shah no niakatra teo amin'ny fitondrana. Nanapaka nandritra ny 50 taona izy, ka izy no mpanjaka fahatelo lava fanapahana teo amin'ny tantaran'i Iràna, aorian'i Sapora II (Shapur II ) sy i Tamaspa I (Tahmasp I). Maro ny zava-nitranga nandritra izany faharetan'ny fanapahany izany, toy ny ady maro nifanaovany tamin'ny Empira britanika, ny fikomian'ny mpanaraka ny babisma, ny ny fanomoana an'i Amir Kabir, sns.
Taorian'ny fahafatesan'i Naser al-Din Shah dia i Mozaffar ad-Din Shah no niakatra teo amin'ny seza fiandrianana. Tamin'ny fitondrany no nitrangan'ny fiovam-penitra iraniana voalohany, dia ny Fiovam-penitra momba ny lalàmpanorenana. I Mozaffar ad-Din Shah no mpanjaka (shah) maty farany tao Iràna. I Mohammad Ali Shah Qajar no nandimby an-drainy tamin'ny taona 1907. Noravany ny antenimiera ka nambarany fa foana ny lalàmpanorenana ka nandatsahany baomba ny Majles (Antenimiera filankevitra silamo). Na dia izany aza dia nandao ny fitondrana izy taorian'ny fandresen'i Teheran nataon'ireo mpomba ny tafika mpomba ny lalàmpanorenana izay namerina indray izany lalàmpanorenana izany.
Taorian'ny fandaozan'i Mohammad Ali Shah Qajar ny fitondrana tamin'ny taona 1909 dia ny zanany Ahmad Shah izay mbola 6 taona no napetraky ny Majles teo amin'ny seza fiandrianan'i Iràna. Tamin'ny fitondrany no nisian'ny Ady Lehibe Voalohany ka nanambara fa tsy mandray anjara amin'ny ady i Iràna. Na dia izany aza dia tsy nahasakana ny tafika britanika izany ka be ny tanin'i Iràna nobodoin'ny Britanika, izay niteraka mosary lehibe tamin'ny taona 1917-1919 sy ny fahafatesan'ny Iraniana miisa 2 tapitrisa any ho any.
Tamin'ny fanonganam-panjakana persiana tamin'ny taona 1921 dia i Reza Pahlavi no nanapaka an'i Iràna. Nandao an'i Iràna i Ahmad Shah noho ny tsy fahasalamany tamin'ny taona 1923, ka nifarana teo ny fanapahan'ny dinastia kajara tamin'ny taona 1925 ary tamin'izany koa no nisandratan'ny dinastian'ny Pahlavi, izay nahatonga ny diany ho lasa sesitany. Maty tany Paris izy tamin' ny taona 1930.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Persia&oldid=1045720"
Dernière modification le 12 Jiona 2022, à 12:34
Voaova farany tamin'ny 12 Jiona 2022 amin'ny 12:34 ity pejy ity.